कोरोनाको खोप लगाएकी पुटिनकी छोरीको शरीरमा देखियो यस्तो परिवर्तन, विश्व नै चकित ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनाको खोप लगाएकी पुटिनकी छोरीको शरीरमा देखियो यस्तो परिवर्तन, विश्व नै चकित !
काठमाडौं । रुस को रोनाबि रुद्धको भ्याक्सिन आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्ने विश्वको पहिलो देश बन्न पुगेको छ। मंगलबार राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले देशमा को रोनाको पहिलो खोप बनेको घोषणा गरेका हुन। भ्याक्सिनको पहिलो डोज आफ्नी छोरीलाई दिइएको पुटिनले आफ्नो सम्बोधनमा बताएका थिए। उनकी छोरीलाई दुई खुराक दिइएको थियो। खोप दिइएपछि उनको शरीरमा तापमानको बदलाब रेकर्ड गरिएको थियो। ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
खोपपछि उनको शरिरमा ठूलो मात्रामा एन्टीबडी बनेको छ। राष्ट्रपति पुटिनले मंगलबारको आफ्नो सम्बोधनमा खोपले जाँचको धेरै चरण पार गरेको र सुरक्षित रहेको बताएका थिए। रुसले को रोनाको पहिलो खोपको नाम ‘स्पुतनिक-V’ राखेको छ। र यसको तस्विर पनि सार्वजनिक गरेको छ। रुसका स्वास्थ्यमन्त्री मिखाइल मुराश्कोका अनुसार विश्वका २० देशले आफ्नो देशमा बनेको पहिलो को रोना खोपका लागि करौडौं डोजको प्रि-अर्डर गरिसकेका छन्। ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****